RASMI: FIFA oo dib u dhigtay koobka cusub ee Kooxaha Adduunka oo lagu ballansanaa in lagu qabto Shiinaha – Gool FM
(Yurub) 18 Mar 2020. War qoraal ah oo uu soo saaray Madaxweynaha FIFA ee Gianni Infantino ayuu ku sheegay inuu soo dhoweynayo in dib loo dhigo koobka qarammada qaaradda Yurub iyo Copa America, kuwaasoo xagaaga dambe loo raray, taasoo ka dhigan in FIFA Confederations Cup iyo FIFA Club World Cup, iyaguna loo yeeli doono jadwal kale oo ah xagaaga sii xiga.
Madaxweyna Infantino ayaa ku tilmaamay tallaabooyinkaas xalka ugu fiican ee kubadda cagta, sidoo kalena uu isugu yeeri doono shir goleed taleefanka ka dhacaya maalinka berrito.
“Adduunka ayaa wajahaya loollan caafimaad oo aan la filayn, waxaana loo baahan yahay in looga falceliyo sida ugu habboon,” ayuu Infantino sheegay, waxaana uu hadalkiisa sii raaciyay in go’aan-qaatayaasha looga baahan yahay wada shaqeyn, is qaddarin fahan looga gudbo xilligan cakiran.
Infantino ayaa sidoo kale tibaaxay in tartanka kooxaha dunida la qaban doono midkood qaybaha dambe ee 2021, 2022 ama 2023, gelinka dambe ee maanta ayaana la filayaa in midkood uu ku dhowaaqo madaxweynaha in tartanka loo kiciyo.
FIFA ayaa horraan qorsheysay in koobka kooxaha dunida loo qaban doono hab cusub, sidoo kalena la ballaarin doono, waxaana lagu madalsanaa in la qabto bartamaha bisha June illaa billawga July ee xagaaga dambe, iyadoo 24 kooxood oo kala imaanaya lix xiriir-qaaradood ay ka qayb galayaan.
Madaxweynaha FIFA ayaa ugu dambeyn hoosta ka xarriiqay, inuu kala fariisan doono xiriirka kubadda cagta ee dalka Shiinaha iyo dowladda dalkaas baajinta koobka kooxaha dunida.